waddaniggu ma niyad jabbo , Aariyal Sharon – somalilandtoday.com
waddaniggu ma niyad jabbo , Aariyal Sharon
Wuxuu ka ruqsaystay ciidamadda Israël 1968,ka dib markii ay is fahmi waayeen madaxdii uu la shaqaynayay ,waxaanu ku biiray xisbigga Labour Party ee wadankaas.
Mar kale xisbigii sii bay isku dhaceen ,wax xilana looma dhiibin ,maadaama xisbigiisu ahaa ka hayay taladda .
1973 dagaalkii October ama yomkabur war , wuxuu yidhi anigoo caruurtayda la joogga ayuu ila
soo hadlay nin sarkaali ,waxaanu ii sheegay in dhaqdhaqaaq waynu ka jirro aaga canal suways ,dabeeto waxaan ugu jawaabay dhaqdhaqaaqaasi waa dagaal .
Intaa ka dib waxaan la hadlay taliyihii aagaas ,waxaanan u sheegay in aan diyaar u ahay in aan la shaqeeyo oo aan khibradayda ku caawiyo ,hassa yeeshee ima uu soo jawaabin .
Waan tagay ,5 Cisho ayaan la joogay ,ka dibna waxaan la hadlay wasaaraddii gaadhaan dhiga oo aan uga waramay xaalku siduu yahay ,ka dibna wadda Tashi baa la iigu yeedhay .waxaanan soo jeediyay qorshe ah in Israel qaado weerar rogaal celina waase la igu diiday .
Golihii wasiiradduna wuxuu go aamiyay xabad joojin ,hassa yeeshee waxaa ku gacan saydhay wasiirkii arrimaha dabada ee maraykan ka henery kissinger oo yidhi Israel hadda waxay u muuqataa mid jiliicsan ,sidaa darteed ciidankeeddu waa Inuu qeexaa waxay la shir taggi lahayd .
Ugu danbayn taladdi waxay noqotay in aan ciidan kayd ahaa ,oo aan dagaalka ku biiro ,hassa yeeshee saraakishii qaybaha kale way ila shaqayn waayeen iyagoo igu xumaynayay ,Ilaa khasaarihii ugu badnaa nasoo gaadhay .
Mar kale ayaa la II yeedhay ,tallo ayaana la I waydiiyay,taladayduna waxay noqotay ,masar siiney kula dagaalami maayo ,sidooda oo kale ayaan kiinaalka uga gudbayaa ,ka Dibna qaahirra ayaan culsyska saarayaa ,waa la igu raacay ,raysal wasaaraduna madaxa ayay II Salaaxday .
Ugu danbayn Sharon wuxuu noqday taliyohii guud ee aagaas ,waxaanu Fuliyay qorshihiisii ,15 Bishii 10 1973 ayaanu ka gudbiy kiinaalkii Ilaa uu gaadhay meel u jirta qaahira 101 km oo ah halkii ay ka dhacday xabad joojintu .
Dagaalki markuu dhamaaday ,Sharon wuxuu ku noqday noloshiisii beer walanimo Ilaa 1982 wax xila looma magacaabin ,hassa yeeshee 2001 wuxuu xanuun usoo dhacay isagoo ah raysal wasaare ,waddaniggu ma niyad jabo .